China Isingeniso Nokusombulula Izixazululo Zefektri Yesivalo Esikhulu Sokususa ifektri kanye nabaphakeli | I-TieLiu
Isingeniso Nokuxazulula Inkinga Ye-Vacuum Supercharger
Umehluko phakathi kwe-vacuum supercharger ne-vacuum boosteris yokuthi i-vacuum boosteris itholakala phakathi kwe-brake pedal ne-brake master cylinder, esetshenziselwa ukwandisa ukunyathela komshayeli ku-master cylinder; ngenkathi i-vacuum supercharger isephayiphini eliphakathi kwe-brake master cylinder ne-cylinder yesigqila, esetshenziselwa ukukhuphula umfutho kawoyela wokukhipha we-master cylinder futhi wandise umphumela wokubhroka.
I-vacuum supercharger yakhiwe ngohlelo lwe-vacuum nohlelo lwe-hydraulic, okuyidivayisi yokucindezela kohlelo lwe-braking hydraulic.
I-vacuum supercharger isetshenziswa kakhulu ezimotweni ezibopha amabhuleki eziphakathi nezincane. Ngokwesisekelo sephayiphu ephindwe kabili yokubhoboza umfutholuketshezi, i-vacuum supercharger kanye neqoqo le-vacuum booster system elenziwe nge-valve yokuhlola i-vacuum, i-vacuum cylinder nepayipi elingenayo lifakwa njengomthombo wamandla wamabhuleki, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwe-braking nokunciphisa amandla e-braking control.Akunciphisi kuphela amandla okusebenza komshayeli, kodwa futhi kuthuthukisa ukuphepha.
Lapho i-vacuum supercharger iphuka futhi isebenza kabi, imvamisa iholela ekuhlulekeni kwamabhuleki, ukwehluleka ukubopha, ukudonsa amabhuleki njalonjalo.
I-vacuum supercharger ye-hydraulic brake iphukile, futhi izimbangela zimi kanje:
Uma i-piston nendandatho yesikhumba yesilinda esizayo ilimele noma i-valve yesheke ingavaliwe kahle, uketshezi lwamabhuleki egumbini elinengcindezi enkulu luzobuyela kungazelele egumbini elinengcindezi ephansi emaphethelweni we-apron noma eyodwa- indlela valve ngesikhathi unyathela amabhuleki. Ngalesi sikhathi, esikhundleni sokuzikhandla, i-pedal izobuyela emuva ngenxa yokubuyela emuva kwe-high-pressure brake fluid, okuholele ekuhlulekeni kwamabhuleki.
Ukuvulwa kwe-valve yokuphuma kanye ne-valve yomoya ku-valve yokulawula kulawula inkanyezi yegesi engena egumbini le-afterburner, okungukuthi, ukuvulwa kwe-vacuum valve kanye ne-valve yomoya kuthinta ngqo umphumela we-afterburner. Uma isihlalo se-valve singavaliwe ngokuqinile, inani lomoya ongena egumbini lokulekelela alanele, futhi igumbi elingenalutho negumbi lomoya alihlukanisiwe ngokuqinile, okuholela ekwehlisweni komphumela wokushiswa ngemuva kanye nokubopha amabhuleki okungasebenzi.
Uma ibanga phakathi kwevalvevu ye-vacuum ne-valve yomoya lincane kakhulu, isikhathi sokuvula kwe-valve yomoya sisalela emuva, izinga lokuvula liyancipha, umphumela wokucindezela uhamba kancane futhi umphumela we-afterburner uyehla.
Uma ibanga likhulu kakhulu, ukuvulwa kwe-vacuum valve akwenele lapho kukhishwa ibhuleki, okuzokwenza ukuthi ibhuleki lihudule.
Brake Servo, I-Booster Assy Brake, I-Auto Brake, Umshini Brake Ukulekelela, I-Aftermarket Brake Booster, Amandla Brake Ukulekelela,